MUHIIM:- Saacid oo ceebeeyay Xasan Sheekh una diray baaq | Baahin -News, Sports, Views, Entertainment, War On Terror, Health and Social Affairs
MUHIIM:- Saacid oo ceebeeyay Xasan Sheekh una diray baaq
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo maanta Magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay ayaa ka hadlay Xaaladaha Siyaasadeed ee dalka iyo Arrimaha Abaaraha oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo Duunyada ku nool inta bada Gobollada Dalka Soomaaliya.
Mr Saacid oo Saxaafadda la hadlay ayaa ugu baaqay Siyaasiyiinta Soomaaliyeed in la iska kaashado Nabad gelyada iyo Arrimaha Doorashooyinka oo dalka haatan uu ku guda jiro.
Waxaana uu ku nuux nuuxsaday in loo baahan yahay in si Uur Furnaan oo wada jir ah dalk waxqabadkiisa la isaga kaashado aana lagu dabaqin arrimaha Siyaasadeed.
Dhinaca kale Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya ayaa ka hadlay Arrimaha Abaaraha waxaana uu ka codsaday Dadweynaha Soomaaliyeed in ay meel uga soo wada jeestaan wax u qabashada dadka ku tabaaloobay Abaaraha waxaana beesha Caalamka uu ka dalbaday in ay gacan ka geystaan wax ka qabashada Arrimaha Beni’aadanimo ee ka jira Soomaaliya.
Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa ahaa Ra’iisul Wasaarihii ugu horreeyay ee Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana uu sheegay in sababta uu u soo gaaray dalka ay tahay in uu kaalinta kaga aadan ka qaato Arriamaha kala duwan ee ka taagan dalka.